The Byre, Upper Faulds, Burray - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yokuzenzela kwindawo eguquliweyo, ebekwe kumhlaba wekhaya lethu losapho. Imizuzu emihlanu ukusuka kwisikhululo sesikhephe saseSt Margaret's Hope. Indawo egqibeleleyo yokubukela izilwanyana zasendle zasekhaya okanye ukutyelela ezinye zeendawo zakudala ze-Neolithic ezaziwa kwihlabathi liphela njenge "Tomb of the Eagles", okanye iindawo zexesha lemfazwe ezinje ngeHoxa Head gun emplacements okanye i-Italian Chapel. Ukuhamba nje ngemizuzu eli-15 ukuya eKirkwall, ngaphesheya kweChurchill Barriers edumileyo ngokuphukelwa yinqanawa.
I-Byre entle eguquliweyo, enembono entle ngaphandle kumhlaba weefama ngaphesheya kwe-Echna Loch kunye ne-Scapa Flow.
I-Byre ilele kwindlela ezolileyo yelizwe, ejikelezwe yifama kwaye inembono entle kulwandle, olukumgama wesiqingatha seekhilomitha. Kukho iilwandle ezintathu ezintle ngaphakathi kohambo lwemizuzu elishumi elinesihlanu. Kuhambo lwemizuzu elishumi ukusuka kwilali entle yaseBurray, enevenkile encinci kunye neSands Hotel enebhari / indawo yokutyela egqwesileyo.
Siyavuya ukukunceda kwaye sikunikeze naliphi na icebiso onokuthi ulifune..... ngokulula usitsalele umnxeba okanye unkqonkqoze kumnyango wethu wangaphambili kwaye ungene kanye..... vele usikhwaze ukuze sikuve!